Markii Hore Jose Mourinho Haddana, Ole Gunnar Solskjaer Oo Daawaha Saaran-Jurgen Klopp Oo Sanad Gudihii Tababarkii Labaad Ka Caydhin Kara Man United. - Gool24.Net
Markii Hore Jose Mourinho Haddana, Ole Gunnar Solskjaer Oo Daawaha Saaran-Jurgen Klopp Oo Sanad Gudihii Tababarkii Labaad Ka Caydhin Kara Man United.
October 8, 2019 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka cabsi qaba in ay Liverpool sabab u noqoto in uu lumiyo shaqada kooxdiisa si la mid ah qaabkii ay Jose Mourinho shaqada uga caydhiyeen wiilasha Jurgen Klopp.
Liverpool ayaa sabab u noqotay in Jose Mourinho shaqada Manchester United laga caydhiyay bishii December, laakiin muddo sanad ka yar waxa uu Ole Gunnar Solskjaer ka cabsi qabaa in uu maro dariiqii Jose Mourinho oo uu waliba ku baxo gacmaha Jurgen Klopp.
Liverpool ayaa bishii December ee la soo dhaafay waxay Anfield ku dubatay kooxdii uu Jose Mourinho hogaaminayay ee Manchester United iyada oo Shaqiri ahaa xidigii labada gool dhaliyay kulankii ay Reds guusha 3-1 ka ahayd ku gaadhay Anfield.
Laakiin wargayska Daily Mail ayaa shaaciyay in Ole Gunnar Solskjaer uu hadda ka cabsi qabo in guuldaro wayn oo ka soo gaadha Liverpool ee kulanka soo socda ee Old Trafford ay sabab u noqon karto in shaqada si rasmi ah looga caydhin karo.
Inkasta oo ay jiraan warar sheegaya in haddaba ay maamulka Man United quus ka tagaan yihiin natiijo fiican oo ay Liverpool ka helaan, waxaa la filayaa in kulanka Norwich City uu noqon karo kan ugu danbeeya ee Solskjaer haddii aanu xal keenin.
Inkasta oo ayna Liverpool rekoodh fiican ku soo haysan Old Trafford, haddana xaalada ay kooxda Jurgen Klopp ku soo jirtay ee guulihii xidhiidhka ahaa iyo murugada ay wiilasha Ole Gunnar Solskjaer ku soo dhex jireen ayaa walwal badan abuuraysa.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa haddaba ku dhibtoonaya in uu xal u heli Man United waxaana ceebtiisa banaanka keentay kooxda iyaduba musiibada ku soo jirtay ee Newcastle United oo Red Devils saddexda dhibcood ka tirsatay.
Man United ayaa is arkaysa iyada oo 8 kulan ka heshay 9 dhibcood waxayna soo dhawayn doonaan Liverpool oo 17 kulan oo xidhiidh ah soo guulaysatay waana guulo la mid ah tirada 17 kii dhibcood ee ay Man United soo heshay waqtigan.
Si kastaba ha ahaatee, Ole Gunnar Solskjaer ayaa hadda ka cabsi qaba in uu ku baxo gacmaha Jurgen Klopp iyo Liverpool si la mid ah tababarihii uu shaqada ka badalay ee Jose Mourinho.